Xulka Banaadir oo rigoore kaga badiyey xulka Nugaal (3-2), una soo baxay finaalaha ciyaaraha gobollada Somaliya, Garowe 2010. – Radio Daljir
Diseembar 28, 2010 12:00 b 0
Garowe, Dec 28 – Mid ka mid ah ciyaartii ugu xiisa badnayd ayaa galabta ka dhacday garoonka Mire Awaare. Ciyaarta ayaa dhex martay xulalka Banaadir v Nugaal oo ku loolamayey u gudubka finaalaha ciyaaraha gobollada Somaliya, Garowe 2010.
Ciyaarta ayaa dhinac kasta oo laga eego isu dheeli tirnayd oo weerar iyo difaac is-barbar socda ay labada xulba soo bandhigeen, wax goolal ahna lama kala dhalin qaybtii 1-aad ee ciyaarta, balse waxaa jawigii ciyaartu is-badaley qaybtii 2-aad oo xulka Barnaadir ay dhaliyeen gool caaqiba leh.
Ciyaari waa galin dambee, xulka Nugaal ayaa weerar cir iyo dhul ah ku hafiyey goolka Banaadir, dhaliyeyna gool daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta.
1-1 ayaana ay ciiyaartu ku dhamaatay waqtigii loogu talagalay.
Waxaa loo gudbay rogoore min 5 gool ah; xulka Banaadir ayaa dhaliyey 3 gool, halka xulka Nugaal ay dhaliyeen 2 gool, lagana qabtay mid. Sidaas ayaana ay guushu ku raacday xulka Banaadir oo hadda u gudbay finaalaha ciyaaraha gobollada Somaliya, Garowe 2010.
Waxaana ay is arki doonaan kii guulaysta xulalka Bari & J. Hoose oo berri, 29-ka December, ciyaari doona.